ဝတ်မှုံရွှေရည် ကို တကယ်ချစ်တာပါလို. ဆိုလာတဲ့ ဒေါင်း… – MEDIALANN
၀တ်မှုံရွှေရည် ကို တကယ်ချစ်တာပါလို. ဆိုလာတဲ့ ဒေါင်း…
ဝတ်မှုန်ရွှေရည်နဲ့ ဒေါင်းနဲ့ဟာဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ လိပ်ပြာစံအိမ်ရုပ်ရှင်မှာကတည်းက ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးမှုခံရတဲ့ နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်ပြီး ကစ်နဲ့ဒေါင်းနဲ့ကိုပရိသတ်တွေက အုံးအုံးကြွက်ကြွက်ဆူဆူညံညံနဲ့ကိုတစ်နိုင်ငံလုံးက သဘောတူခဲ့ကြတာပါ။ Press Show တွေ ပွဲတက်တွေမှာ ကစ်နဲ့အတူတူထိုင်ရတိုင်း ဒေါင်းက ကစ်ကို ကမ္ဘာပေါ်မှာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးရတနာတစ်ပါးလို တယုတယအမြတ်တနိုးငေးမောကြည့်နေခဲ့တဲ့ အကြည့်တွေကိုလည်း ပရိသတ်တော်တော်များများမှတ်မိကြဦးမှာပါ။ ဒေါင်းက အခုလည်းပဲ မကြာသေးမီက MRTV –4အနုပညာမိုးကောင်းကင်အစီအစဉ်မှာ ကစ်ကိုတကယ်ချစ်တာဆိုတဲ့အကြောင်းရင်ဖွင့်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒေါင်းက ဒဏ္ဍာရီမိုးဇာတ်လမ်းထဲမှာ သရုပ်ဆောင်ရတဲ့ ကာရိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး “ကိုမိုးနီလွင်နဲ့ ကာရိုက်တာဖွဲ့စည်းထားပုံပေ့ါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ ကိုဝင်းလွင်ထက်တို့ ကိုသြရသတို့ရဲ့ ဂိုက်လိုင်းပေးမှုအပေါ်မှာပဲ ကျွန်တော်တစ်ဆင့်ခံစားချက်ကို ထပ်ထည့်ပြီးတော့ လုပ်တာပေါ့လေ။ ဒေါသကိုဘယ်အချိန်မှာထိန်းမယ် ဘယ်အချိန်မှာထုတ်မယ်။ အဲကိစ္စတွေ သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေ သူ့ရဲ့နောက်ကွယ်က ခံစားချက်တွေ၊တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ခံစားချက်တွေ Art Director ရော Director ရော နှစ်ယောက်လုံးက သိထားပြီးသား အဲဒီအပေါ်မှာပဲ ကျွန်တော်ကလိုက်ပြီး စီးမျောရတာပေါ့။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဇာတ်ကောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တစ်မျိုးအနေနဲ့ တာဝန်ယူရတာပေ့ါ”လို့ ပြောပြထားပါတယ်။
သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာ နစ်ဝင်စီးမျောခဲ့ရပုံတွေကိုလည်း ဒေါင်းက “ကျွန်တော်က ဒီဇာတ်ကား ဒီအခန်းထဲမှာပဲ mood ထည့်ပြီး ကျန်တာကိုအားလုံးမေ့သွားတာ။မေ့သွားတော့ကျတော့ ဒါရိုက်တာတစ်ခါတစ်လေ လိုချင်တဲ့ဟာပြောရင်တောင်မှပဲ ကျွန်တော် control out သွားရော”လို့ ရယ်မောပြီးပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။ ကိုရဲတိုက်နဲ့ အတူတူသရုပ်ဆောင်ရတဲ့အတွေ့အကြုံကိုလည်း “ကျွန်တော်ကိုရဲတိုက်နဲ့တစ်ခါမှမဆုံဖူးဘူး။ သူက ဝါရင့် ဝါရင့်ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့နော်။ ဝါရင့်ဆိုတော့ သူတို့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာအပေါ်မှာ chemistry လုပ်တဲ့ဟာမှာ သူကအရမ်းတော်တယ်။ တကယ်တော်တယ်။ အလုပ်လုပ်ရတာအရမ်းအဆင်ပြေတယ်။ အပေးအယူမျှတယ်။ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကိုလုပ်လိုက်တာနဲ့ သူ့ဘက်က Response က ချက်ချင်းလာပြီးသား။အဲဒါတွေက တကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအစစ်ဖြစ်ဖို့ တွန်းအားဖြစ်စေသောပဲ”လို့လည်းဝမ်းသာအားရဖောက်သည်ချပြောပြသွားပါတယ်။
ဒေါင်းက ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ကိုတကယ်အရမ်းချစ်တာဆိုတဲ့အကြောင်းလည်း “သူနဲ့ chemistry ကပိုများတာကိုး ဒီဇာတ်လမ်းမှာလေ။ သူ့ကိုကိုယ်က အရမ်းချစ်တာကိုး။ ကျွန်တော်က အရမ်းချစ်ရင်းနဲ့ တကယ်ချစ်ပစ်တာ။ ကျွန်တော်က တကယ်မချစ်ပဲနဲ့ သရုပ်ဆောင်ဖို့မခံစားတတ်ဘူး။ ကျွန်တော်က တကယ်ချစ်ပစ်တာ။ ပျော်စရာကောင်းတယ်။ သူကလည်း တကယ့်ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တော့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုသူကမြင်တယ်။ အဲဒီလိုပဲ သူ့ရဲ့ခံစားချက် သူ control လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေနဲ့ ကျွန်တော် ဇာတ်ကောင်control လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေမှာ သူ chemistry ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်။ ကြိုညှိစရာမလိုအောင် နားလည်မှုရှိတယ်။ ရှေ့မှာလည်းတစ်ကားရိုက်ထားတဲ့အခါကျတော့ ဒီမှာလည်းထပ်ပြီးနားလည်မှုရှိသွားတယ်လို့ထင်တာပဲ”လို့ ရှက်သွေးဖြာတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ ရယ်မောရင်း ဖြေကြားသွားပါတယ်။ Ref – ပြောချင်လွန်းလို့
ဒေါငျးက ဝတျမှုနျရှရေညျကိုတကယျအရမျးခဈြတာဆိုတဲ့အကွောငျးလညျး “သူနဲ့ chemistry ကပိုမြားတာကိုး ဒီဇာတျလမျးမှာလေ။ သူ့ကိုကိုယျက အရမျးခဈြတာကိုး။ ကြှနျတျောက အရမျးခဈြရငျးနဲ့ တကယျခဈြပဈတာ။ ကြှနျတျောက တကယျမခဈြပဲနဲ့ သရုပျဆောငျဖို့မခံစားတတျဘူး။ ကြှနျတျောက တကယျခဈြပဈတာ။ ပြျောစရာကောငျးတယျ။ သူကလညျး တကယျ့ဝါရငျ့သရုပျဆောငျမငျးသမီးတဈယောကျဖွဈတော့ ကိုယျဖွဈခငျြတဲ့ဆန်ဒကိုသူကမွငျတယျ။ အဲဒီလိုပဲ သူ့ရဲ့ခံစားခကျြ သူ control လုပျထားတဲ့ဟာတှနေဲ့ ကြှနျတျော ဇာတျကောငျcontrol လုပျထားတဲ့ဟာတှမှော သူ chemistry ကောငျးကောငျးလုပျနိုငျတယျ။ ကွိုညှိစရာမလိုအောငျ နားလညျမှုရှိတယျ။ ရှမှေ့ာလညျးတဈကားရိုကျထားတဲ့အခါကတြော့ ဒီမှာလညျးထပျပွီးနားလညျမှုရှိသှားတယျလို့ထငျတာပဲ”လို့ ရှကျသှေးဖွာတဲ့မကျြနှာလေးနဲ့ ရယျမောရငျး ဖွကွေားသှားပါတယျ။ Ref – ပွောခငျြလှနျးလို့